Ụfọdụ mgbochi ịda mbà n'obi na-abawanye ihe ize ndụ nke ọrịa C. diff - Ọgwụ 2022
Ụfọdụ mgbochi ịda mbà n'obi na-abawanye ihe ize ndụ nke ọrịa C. diff
Clostridium difficile, nje na-ebuteghachi ọrịa, bụ isi ihe kpatara afọ ọsịsa nke ụlọ ọgwụ na North America na Europe. Otu n'ime ọrịa ndị a na-ahụkarị n'ụlọ ọgwụ, ọrịa C. difficile (CDI) na-akpata ihe karịrị ọnwụ 7,000 kwa afọ na U.S. naanị. Ihe egwu dị ukwuu maka CDI bụ ikpughe na ọgwụ nje n'ime ọnwa 2-3 gara aga, ịka nká, ụlọ ọgwụ, na ebe obibi nlekọta ogologo oge.
Ugbu a, ejikọtara CDI na mgbochi ịda mbà n'obi.
Ruo ọtụtụ afọ, a na-eche na ọtụtụ ụdị ọgwụ na-abawanye ohere nke CDI, gụnyere ndị na-egbochi ịda mbà n'obi. Nyere na ịda mbà n'obi bụ ọnọdụ ahụike nke atọ a na-ahụkarị n'ụwa nile, otu ìgwè sitere na Mahadum Michigan nyochara ọdịdị nke ihe ize ndụ a.
Ndị otu ahụ buru ụzọ mụọ ọrịa Clostridium difficile na ndị nwere na ndị na-enweghị ịda mbà n'obi wee chọpụta na ndị nwere nnukwu ịda mbà n'obi nwere ohere dị elu nke 36 pasent CDI karịa ndị na-enweghị ịda mbà n'obi. Nchọpụta a na-ejide maka nsogbu ịda mbà n'obi dị iche iche, ụjọ, na nsogbu uche.
Afọ na nkwado ezinụlọ metụtakwara ihe ize ndụ nke CDI. Ndị okenye, ndị America di ha nwụrụ nwere pasent 54 karịa ndị ọgbọ ha lụrụ di na nwunye ibute ọrịa ahụ. Nanị ibi naanị ya ji pasent 25 mụbaa ihe ize ndụ ahụ.
Na-esote, ndị otu ahụ lere anya ịhụ ma enwere njikọ n'etiti ọgwụ mgbochi ịda mbà n'obi na CDI nke ụlọ ọgwụ nwetara. Ha chọpụtara na n'ime ọgwụ iri na abụọ a nwalere, naanị mirtazapine na fluoxetine na-abawanye ohere nke CDI - nke ọ bụla na-abawanye ihe ize ndụ ahụ.
"Ịda mbà n'obi na-emekarị n'ụwa nile. Anyị amarawo ogologo oge na ịda mbà n'obi na-ejikọta ya na mgbanwe nke usoro eriri afọ, " Dr. Mary Rogers bụ onye duziri ọmụmụ ihe ahụ kọwara. Ya na ndị otu ya kwusiri ike na amabeghị ma mmụba nke CDI bụ n'ihi mgbanwe microbial na eriri afọ n'oge ịda mbà n'obi ma ọ bụ ọgwụ ndị metụtara ịda mbà n'obi. Ejikọtara ntiwapụ nke CDI na nso nso a na ụdị ọhụrụ (BI/NAP1/027) nke C. difficile nke na-emepụta nsị karịa ụdị akụkọ ihe mere eme.
"Nchọpụta anyị nke njikọ dị n'etiti ịda mbà n'obi na Clostridium difficile kwesịrị inyere anyị aka ịmata ndị nọ n'ihe ize ndụ nke ọrịa na ikekwe, na-agba ume nyocha nke usoro ụbụrụ ụbụrụ na-emetụta," ka Dr. Rogers kwuru.
Ndị otu ahụ na-atụ aro na ndị e debere ụdị ọgwụ mgbochi ịda mbà n'obi kwesịrị ịga n'ihu na-akpọrọ ha ma ọ bụrụ na dọkịta ha enyeghị ndụmọdụ ọzọ.